Xayawaanka khadka tooska ah: Waxa aad ka Ogaato Telemedicine iyo Beddelka Caymiska Xayawaanka
Bogga ugu weynEeyaha CaafimaadkaXayawaanka khadka tooska ah: Waxa aad ka Ogaato Telemedicine iyo Beddelka Caymiska Xayawaanka
Waxa aad ka Ogaato Waxyaabaha Ku Saabsan Telemedicine-ka iyo Beddelka Caymiska Xayawaanka
Telemedicine loogu talagalay xayawaanka rabaayada ah
Goorma ayay tahay inaad la xiriirto dhakhtarka xoolaha ee internetka?
Maxaa ku saabsan xaaladaha degdegga ah?
Goorma ayaan rabaayadayda u kaxeeyaa dhakhtarka xoolaha?
Aynu run sheegno: mararka qaarkood aad bay u dhib badnaan kartaa inaad booqato dhakhtarka xoolaha Ka soo qaad inaad ku nooshahay aag ay rugta caafimaadka xoolaha ee kuugu dhow ay mayl u jirto.
Ama takhtarkaaga shahaado la'aanta ah ma shaqeeyo 24/7, mana heysatid fursad aad ku hesho la tashi kale. Mararka qaarkood, eygaagu kaliya ma cunayo, oo waxaad ka labalabaysaa inaad u degdegto dhakhtarka xoolaha ASAP ama aad sugto dhawr maalmood si aad u aragto haddii ubadkaaga lumitaanka rabitaanka cuntada ay sii socoto.
Ama ma hubin kartid in daawadu ku habboon tahay kitkaaga iyo in kale. Fursad ahaan, waxa kale oo aad ka labalabayn kartaa in buro eygaaga ay tahay xaalad degdeg ah iyo in kale.
Sanadihii ugu dambeeyay, telemedicine-ka xayawaanka ayaa kor u kacay, isagoo soo bandhigaya xalal hore oo tiknoolaji ah oo aan jirin oo loogu talagalay waalidiinta xayawaanka. Isticmaalka adeegyada vet onlaynka ayaa noqday mid la heli karo si ka badan sidii hore.
Warka wanaagsani waa in aad qiimeyn karto degdegga ah arrinta caafimaadka xayawaankaaga oo aad ogaato in ay tahay xaalad degdeg ah iyo in kale.
Iyadoo kobaca telemedicine-ka xayawaanku uu aad u weyn yahay, haddana waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya telemedicine-ka aadanaha iyo xayawaanka.
Maqaalkan, aan ku ogaano sida ay u shaqeeyaan dhakhaatiirta online-ka ah, waxa aad ka filan karto booqasho muuqaal ah, iyo marka aad u qaadanayso xayawaanka guriga "dhabta ah"Dhakhtarka xoolaha ayaa ah doorashada ugu wanaagsan.
Adeegyada bixiya telemedicine ee xayawaanka rabaayada ah waxay u shaqeeyaan si kala duwan, min hal goob ilaa mid kale. Qaar baa laga yaabaa inay bilaash yihiin; kuwa kale waxay kaa rabaan inaad bixiso su'aal kasta oo aad samayso.
Tusaale ahaan, Petcube's Vet online teletriage waxa ay bixisa nooc isdiiwaangelineed oo ah $19.99 bishii.
Xulashooyinka hore waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin iyadoo ku xiran tayada adeegga aad hesho, halka kan dambe uu dammaanad qaadayo 24/7 helitaanka dhakhaatiirta internetka ee shahaadeysan, daryeelka gaarka ah, iyo dabagalka.
Fadlan ogow in teletriage-ku u taagan yahay bixinta daryeel dheeri ah, kaas oo aan ku beddelin cilaaqaadkaaga caadiga ah dhakhtarka xoolaha.
Faa'iidada ugu muhiimsan ee adeegyada telemedicine-ka caafimaadka xoolaha ayaa ah in badi ballamada vet-ternational iyo booqashooyinka xiga ay noqon karaan sheeko-wadaag.
Tusaale ahaan, waxaad caddayn kartaa haddii Fido-gaaga xad-dhaafka ah ciyi uu yahay mid qalafsan ama dabeecad la filayo.
Xaaladaha qaarkood, isticmaalayaasha adeegyada xanaanada xoolaha ee khadka tooska ah waxay sidoo kale ku weydiin karaan su'aalo kasta oo ku saabsan daawooyinka la qoray ama isbeddelada cuntada. Guud ahaan, khabiirada caafimaadka xoolaha ee khadka tooska ah ayaa bixiya daryeel aad u fiican marka ay timaado xaalad aan degdeg ahayn iyo su'aalaha la xiriira dhaqanka.
AKHRI: Hagaha Waalidiinta Xayawaanka ah ee Eyda Paws Pododermatitis
Ka sokow caddaynta haddii xaaladdu tahay mid degdeg ah, qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee caafimaadka xoolaha ee internetka waa:
Ka hel la-talinta caafimaadka iyo dhaqanka khubarada dhabta ah, ee ha ka helin golayaasha xayawaanka ama mareegaha hadhsan.
Saacado badan oo dabacsan iyo guud ahaan ku habboonaanta helitaanka dhakhtarka xoolaha ee raaxada gurigaaga.
Waxaad si dhakhso ah u caddayn kartaa in saaxiibkaa dhogorta leh uu u baahan yahay daryeel degdeg ah ama ay tahay wax lagu xallin karo la tashi daqiiqado ah.
Markaad dooranayso bixiye adeeg hufan, waxaad helaysaa la tashi qiimo jaban marka loo eego rasiidhada dhaqameed ee xoolaha
Markaad la xiriirto dhakhtarka xoolaha ee internetka, waxaad heleysaa jawaab degdeg ah, taas oo aadan heli doonin markaad u sii socoto rugta caafimaadka xoolaha ee kuugu dhow.
Iyadoo faa'iidooyinka telemedicine-ka xayawaanku ay muuqdaan, waxaa sidoo kale jira kiisas yar oo aad wali ku fekereyso inaad u kaxeyso dhakhtarkaaga xoolaha. Sababtoo ah dhakhaatiirta internetka ee internetka, xitaa iyagoo haysta shahaado aqoon leh, ma qori karaan daawooyin, waa wax ay tahay inaad ku sameyso dhakhtarkaaga caadiga ah. Sidoo kale, dhakhtarka xoolaha ee internetka ma xamili karo xaaladaha degdegga ah.
Markaa haddii canuggaaga ama bisaddaadu dhaawacmaan ama ay muujiyaan astaamo daran, takhtarka khadka tooska ah wuxuu kaliya tilmaami karaa baahida loo qabo in loola degdego dhakhtarkaaga xoolaha ama rugta caafimaadkaaga.
Su'aal kale oo ay tahay in mulkiilayaasha xayawaanku ay iswaydiiyaan waa: marka ay habboon tahay in lala xiriiro dhakhtarka xoolaha ee internetka. Sidaan horay u soo sheegnay, xaaladaha degdega ah waxaa sida ugu wanaagsan loo xalliyaa marka la joogo booqashooyinka nolosha dhabta ah.
Si kastaba ha ahaatee, cidhifka tartanka ee telemedicine-ka vet ayaa ku jira habka loo wajaho fayoobida xayawaanka.
Si sax ah, waxaad u daadi kartaa khadka khabiirka khadka tooska ah si aad u caddeyso arrimo badan oo kala duwan, oo u dhexeeya caqabadaha nafaqeynta iyo dabeecadaha ilaa wakhtiga ciyaarta iyo kiisaska bukaanka gaarka ah.
Haddii eygaagu bilaabay inuu qufaco ama tuuro, waxaa jira sababo badan oo ka dambeeya dhaqankan.
Xaaladaha qaarkood, baabuurka degdega ah ee rugta caafimaadka waa qasab. Halka kuwa kale, la-tashiga khadka tooska ah uu ku filnaan doono inuu caddeeyo sababaha hoose ee ka dambeeya hab-dhaqankaas.
Weydiimaha sida matag ama shuban waa fidsan yihiin, sababtuna waxay u dhaxayn kartaa calool xanuun fudud ilaa sun ama xubnaha oo shaqada gabay.
Taasi waa sababta in la haysto ikhtiyaarka ah in lagu tuuro khadka takhasuska takhasuska leh ay aad waxtar ugu yeelan karto weydiimahan caadiga ah. Sababtoo ah dhammaan dhakhaatiirta xoolaha ayaa loo tababaray inay qiimeeyaan degdegga kiis kasta oo gaar ah, la-tashiga internetka ayaa kaa badbaadin kara waqti iyo lacag badan haddii kiisku aanu ahayn mid degdeg ah.
AKHRI: Qoorta boodada ma u keeni kartaa kansarka eeyaha? 7 -da Sare: Xirmooyinka ugu fiican ee Eeyaha
Sidoo kale, yeynan iloobin in sheekeysiga khadka tooska ah uu noqon karo il weyn oo macluumaad ah oo ku saabsan daryeelka ka hortagga.
Haddii aad hayso wax su'aalo ah oo ku saabsan daawooyinka shilinta ama boodada, shaki la'aan waa doorashada ugu fiican inaad si fool ka fool ah ugala hadasho dhakhtarkaaga xoolaha.
Taa baddalkeeda, adeegyada khadka tooska ah waxay kuugu adeegi karaan wax weyn iyagoo haga ilaha khadka, calaamadaha ganacsiga, ama xitaa talooyinka wax soo saarka.
Ha ka waaban inaad waydiiso su'aalaha ugu badan ee aad qabto maadaama khabiirka khadka ku jira uu aad u jecel yahay inuu kala tashado waalidiinta rabaayada ah arrimahan oo kale.
Sida aan uga hadalnay kiiska shuban eeyaha ama matagga, arrintu waxay noqon kartaa wax ka badan calool xanuun. Maxaa dhacaya haddii ay tahay shay ka sii daran, sida sakhradda ama beerka oo shaqadiisa gabay?
Sidan, qiimaha daawadu wuxuu gaari karaa boqolaal doolar, lacag ah oo laga yaabo inaadan filaneynin inaad bixiso inta lagu jiro hal booqasho.
Iyadoo ay jirto ikhtiyaar lagu iibsado caymiska vet, qaar ka mid ah qorshayaashan ma daboolaan booqashooyinka degdegga ah iyo kharashyada lama filaanka ah ee soo socda.
Sababtoo ah ma jiro qof ka badbaado xaaladaha degdega ah, oo ku dhici kara waalid kasta oo rabaayada ah, beddelka caymiska xayawaanka dhaqameed ayaa jira. Adeegyadan ayaa daboolaya dhaawacyada lama filaanka ah, dhaawacyada, xannibaadaha, iyo xaaladaha kale ee halista ah ee u baahan daryeel caafimaad degdeg ah.
Qaado Sanduuqa Gurmadka tusaale ahaan. Adeeggan khadka tooska ah, waxaad heleysaa isku darka teletriage onlayn ah iyo caymiska maaliyadeed ee xaalad kasta oo degdeg ah oo nafta halis gelinaysa oo laga yaabo inay ku dhacdo xayawaankaaga rabaayada ah.
Nidaamku waa sahlan yahay, marka hore, la hadal dhakhtarka xoolaha ee internetka si aad ugala hadasho in arrintu ay degdeg tahay iyo in kale. Marka uu takhtarka takhasuska leh uu xaqiijiyo kiiska degdegga ah oo uu kiciyo sanduuqaaga, waxaad u degdegaysaa rugta caafimaadka xayawaanka ee kuu dhow oo hel gargaarka lagama maarmaanka ah.
Waxa aad rasiidhka ku soo qaadanaysaa kharashka ugu dambeeya ee dhakhtarka xoolaha oo aad lacagtan laguu soo celiyo wax yar ka dib marka dhammaan daawaynta la sameeyo isla maalintaas, si aadan ugu baahnayn inaad jeebkaaga ka bixiso.
Sanduuqa Xaaladda Degdegga ah ee aan soo sheegnay, wadarta caymisku waxay u dhigantaa $3,000 sannadkii, lacag hufan oo daboolaysa kharash kasta oo aan la filayn.
Si kastaba ha ahaatee, xitaa adeegyadan oo kale waxay la yimaadaan shuruuc iyo qawaaniin, inta badan waxay muujinayaan dhacdooyinka la daboolay.
Sidii hore loo soo sheegay, dhammaan xaaladaha caafimaad ee lama filaanka ah iyo kuwa daran ee u baahan daaweyn degdeg ah waa la magdhabaa, tani waxay la macno tahay kiiskaagu waa inuu noqdaa shil nafta lagu daaweynayo oo lagu daboolayo sanduuqa, xaaladduna waa cakiskeeda ee ku saabsan qalliinnada la qorsheeyay iyo ballamaha loo qorsheeyay.
Marka la eego xaaladaha hore u jiray, ma jiraan wax xaddidaad ah oo arrintan ku saabsan, sida shilalka nafta khatarta ah waxay ku dhici karaan xayawaan kasta, tani waxay noqon kartaa nafis weyn waalidiinta xayawaanka qaarkood.
AKHRI: 5 siyaabood oo lagu hagaajin karo calool istaagga eeyga
La xiriirida khabiir takhasus leh oo khadka tooska ah ayaa si fiican uga shaqeysa nafaqada, dhaqanka, iyo su'aalaha ladnaanta guud.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira daraasiin kiisas marka la-tashiga online-ka ah uusan wax wanaagsan sameyn doonin. Qaar ka mid ah xaaladaha caadiga ah ee u baahan ka fiirsi degdeg ah rugta caafimaadka xoolaha waa:
matag daran, shuban, ama khalkhal cunto oo soconaya in ka badan hal maalin;
Dhaawacyada shilalka ama dhacdooyinka naxdinta leh ee ku lug leh dhutin;
Nabaro furan, dhiig-bax, ama dhaawacyo kasta oo la xidhiidha;
Neefsashada oo ku adkaata, qufac daran, iyo heerka neefsiga oo degdeg ah;
Suuxdin, curyaan, ama dhaawac kale oo neerfaha;
Qaniinyada cayayaanka ama qaniinyada;
Cunista jidhka shisheeye;
Iyo qaar kaloo badanba.
Sida aad arki karto, calaamado walaac leh oo kala duwan ayaa aad u weyn, oo u dhexeeya shilal ilaa xaalado hore u jiray oo xataa noqon kara dhimasho.
Haddii aad aragto in mid ka mid ah kiisaska la sheegay ay yar yihiin, wakhti ha lumin oo la xiriir dhakhtarka xoolaha ee internetka si aad u xaqiijiso kiiska degdega ah daqiiqado gudahood. Kadib, waa waqtigii aad si degdeg ah u aadi lahayd isbitaal oo aad u heli lahayd daryeelka iyo daawaynta aadka loogu baahan yahay haddii ay dhacdo wax dhaawac ah.
In kasta oo telemedicine-ka xayawaanku uu weli kobcayo isagoo si joogto ah u abuuraya qaabab iyo adeegyo cusub, kor u kaca ayaa ahaa mid muhiim ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Hadda, waalidiinta rabaayada ah waa lagu soo dhaweynayaa inay u isticmaalaan adeegyadan sida Online Vet ama fund Emergency Fund teletriage ahaan ama beddelka caymiska xayawaanka, sidaas awgeed.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah inay u shaqeeyaan sidii adeegyo isdiiwaangelin, oo badiyaa ku kaca wax ka yar rasiidka caadiga ah ee rugta caafimaadka xoolaha.
Maqaalkani waxa uu daboolay dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan telemedicine-ka xayawaanka. Iyadoo farqiga u dhexeeya daryeelka telemedicine-ka bini'aadamka iyo xayawaanka rabaayada ah uu jiro, qaabkani wuxuu mustaqbal wanaagsan u leeyahay waalidiinta xayawaanka ah ee adduunka oo dhan.
Ka dib oo dhan, helitaanka aan xadidnayn ee helitaanka dhakhtar u qalma si uu u caddeeyo su'aalaha nafaqada, dhaqanka, iyo fayoobaanta waa wax aan qiimo lahayn.
Xusuusin kama dambays ah, fadlan xasuusnoow in adeegyada noocaan ah sida ugu wanaagsan loogu sifeeyay kala soocidda, bixinta daryeel dheeri ah.
Si kale haddii loo dhigo, ha jebin xidhiidhka bukaanka-macmiilka-bukaanka weli maadaama booqashada dhakhtarkaaga xoolaha laga yaabo in weli loo baahdo. Haddii aad adigu tahay waalid xayawaan ah, runtii waxaad heli doontaa xasillooni maskaxeed, gaar ahaan xaaladaha marka aad u tagto dhakhtarka xoolaha ay aad u adag tahay.
Views Views: 2,398
caymiska xayawaanka online
beddelka caymiska xayawaanka
telemedicine iyo beddelka caymiska xayawaanka
article Previous8 Siyaabood ee Kursiga Curyaanka Eey uu Ka Caawinaayo Xayawaanka Xayawaanka ah Arimaha Lugta Dambe
Next articleSida Loo Doorto Inta u dhaxaysa Korsashada iyo Iibsashada Ey
Hagaha Waalidiinta Xayawaanka ah ee Eyda Paws Pododermatitis
Daaweynta Laser-qabow ee Eyda? 3 Xaqiiqooyinka la Oggo
5 siyaabood oo lagu hagaajin karo calool istaagga eeyga
Inta badan Dhibaatooyinka Caafimaadka Eeyaha: Calaamadaha, Sababaha, & Daawooyinka